Dowlada Turkiga Oo Shaqada Ka Joojisay 12 Kun Askari. – Calamada.com
Dowlada Turkiga Oo Shaqada Ka Joojisay 12 Kun Askari.
calamada October 5, 2016 2 min read
Taliska Booliiska ee Wadanka Turkiga waxay sheegeen in dadka la xiray ay ku jiraan 2523 Saraakiil ah,Â waxaana Dowladdu ay sheegtay in Askarta iyo Saraakiisha la qabtay Maxkamad lasoo taagi doono, iyadoo lagu soo oogayo khiyaano qaran.
Telefeshika lagu magacaabo â€œCNN Tukeyâ€ ayaa sheegay in tallaabta ay qaadeen hoggaanka Booliiska ee shaqada looga joojiyay Kumanaanka Ciidamada ah ay ka dambeysay kadib baaritaan dheer oo ay sameysay Wasaaradda qaabilsan arrimaha gudaha.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Idaacadda Andalus 04-01-1438 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Radio Andalus 05-01-1438 Hijri.